Date My Pet » Iti No To Chisinganakidzi First Misi
Last updated: Nov. 27 2020 | < 1
Misi First Uchazoziva Chaizvoizvo Want To Go On
Kuvaka vamwe mafaro ndangariro pamwe inotsiva yedu stereotypical chisvusvuro uye firimu.
Game Night: Fun negirazi waini kana vaviri. Kurayira pizza, Chicherai yekare chikoro bhodhi mitambo kubva pauduku (funga Operation, Twister, fembera Who?) uye imi muchava kushamiswa zvakadini mafaro une!
Kubata A Gig: Live mumhanzi anotora kumanikidzwa kubvisa zvishoma. Unogona tauriranai kure pamusoro chinonwiwa asi havazofaniri vazadze musi yose chaiparira kukurukura.
Zoo / Aquarium: Pane zvakawanda kuona nekutaura pamusoro. wo, kana uri zvishoma nyara, uchiona mhuka huru nzira zuzai yokutanga musi kusagadzikana – kunyanya kana uri panguva chimupanze mukomberedzwa.
Adventure Activities: Zvokuita pachenyu mabasa akafanana ZIP lining, segways uye dombo pakukwira makomo. A mafaro zuva panze anoda yakawanda chikwata basa.
ikapenya Picnic: Zviri zvishoma pamusoro Cliche asi nokuti zvinonakidza, zvemangwana akangoverengawo panguva imwe chete. Sarudzai rakanaka nzvimbo; zvose dzenyu kufarira chikafu nehomo bubbly - zvemangwana chipa!
Split Dating: Mumwe munhu anofunga chinhu kuitira hafu musi. nzira iyi vaviri uzive pamusoro peiko uyewo kunovhengana zvinhu zvishoma!
Find Date Your